တရုတ် 1.4ml, 5ml Cryo Vial ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | J.able
မော်ဒယ်နံပါတ်: CV-1.4 / CV-5
5ml ပမာဏ၊ ရောင်စုံဦးထုပ်
အရောင် : အပြာ
အရောင်- အစိမ်းရောင် ဦးထုပ်
1. ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် polypropylene ပစ္စည်း၊ မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသော၊ ထပ်ခါတလဲလဲ အေးခဲပြီး ရောနှောနိုင်သည်။
2. အဖုံးကို အနီရောင်၊ အဝါ၊ အပြာ၊ အစိမ်း၊ အဖြူ၊ ခရမ်းရောင်နှင့် လိမ္မော်ရောင်တို့ဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
3. အီလက်ထရွန်ရောင်ခြည် ပိုးသတ်ခြင်း၊ RNASC မရှိ၊ DNase မရှိ၊ endotoxin နှင့် နိုင်ငံခြား DNA မရှိပါ။
Our well-equipped facilities and exceptional excellent control across all stages of manufacturing enables us to guarantee total buyer gratification for Bottom price China 1.8ml 2ml PP Polypropylene Cryo Vials Cryovials , We sincerely hope to judge some satisfactory interactions along with you from the in the vicinity ရှည်လျား၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုကို သင့်အား အသိပေးပြီး သင်နှင့်အတူ ခိုင်မာသော ကုမ္ပဏီဆက်ဆံရေးကို တည်ဆောက်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
အောက်ခြေစျေးနှုန်း တရုတ် 1.8ml Cryovial၊ Polypropylene Cryovials၊ ပြင်းထန်သော ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရသော ကျွန်ုပ်တို့သည် အမှတ်တံဆိပ်တည်ဆောက်မှုဗျူဟာကို စတင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့ကို ရရှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် "လူသားဆန်သော သစ္စာရှိသော ဝန်ဆောင်မှု" ၏ စိတ်ဓာတ်ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားပါသည်။
ယခင်- Nasal Sampling Foam Swab
နောက်တစ်ခု: 1ml၊ 2ml Cryogenic Vial
Buccal Swab စုဆောင်းမှုအစုံ, Self Standing Centrifuge Tubes များ, Viral Transport Media Kit, Falcon Centrifuge Tubes 15ml, Sterile Microcentrifuge Tubes များ, Nasopharyngeal Swab ကလေးအထူးကု,